Nnwom 41 AKCB - 詩篇 41 CCBT
1Nhyira ne onipa a mmɔborɔni asɛm ho hia no;
Awurade gye no wɔ amanehunu bere mu.
2Awurade bɛbɔ ne ho ban na wakora ne kra;
obehyira no wɔ asase no so;
ɔrennyaa no mma nʼatamfo apɛde.
3Awurade bɛhwɛ no wɔ ne yare mpa so
na wagye no asi hɔ.
4Mekae se, “Ao Awurade hu me mmɔbɔ;
sa me yare, efisɛ mayɛ bɔne atia wo.”
5Mʼatamfo de adwene bɔne ka fa me ho se:
“Da bɛn na obewu ama ne din ayera?”
6Bere biara a obi ba me nkyɛn no,
ɔka atosɛm, na ne koma hɔre dinsɛe;
ofi adi kɔ a, ɔde kodi nseku.
7Mʼatamfo nyinaa keka asomsɛm fa me ho;
wosusuw bɔne ma me na wɔka se:
8“Ɔyare bɔne bi abɔ no;
ɔrensɔre mfi nea ɔda hɔ bio.”
9Mpo me yɔnko pa ara a mede me ho too no so,
nea me ne no too nsa didii no,
asɔre atia me.
10Nanso wo, Awurade, hu me mmɔbɔ;
ma me so, na mintua wɔn so ka.
11Minim sɛ wʼani sɔ me,
na me tamfo renni me so nkonim.
12Me nokwaredi mu, wukura me mu
na wode me gyina wʼanim afebɔɔ.
13Nhyira nka Awurade, Israel Nyankopɔn,
nnɛ ne daa nyinaa.
Amen! ne Amen!
AKCB : Nnwom 41
第 41 篇